Ukunxiba ezemidlalo, ibhatyi yokhuseleko, iihempe ezixhonyiweyo, iVesti enesikhuseli- ukuNakana
Iyunifomu yebhola yomnyazi
I-Tie Dye Pullover Hoodie
Uqeqesho lwebhola ekhatywayo
Umdlalo webhola ekhatywayo
Ijezi yeSoka kunye neeShoti
Umzi mveliso wethu uqinisekisiwe yi-BSCI, iCoca-cola iphicothiwe, isebenzisa inkqubo yolawulo lwe-ISO9001. Ilaphu liqinisekisiwe yi-OEKO-TEX100, iBluesign, ingqamana noMgangatho weHlabathi oSetyenziswayo kwakhona.
Ubungakanani beFektri kwiiMitha eziSikwere
Ngaba ufuna ukufunda okungakumbi?
Simi eMantla e-China, ngendleko zabasebenzi ezisezantsi kwaye sikufutshane neTianjin Port kunye neBeijing Airport, ezisenza sikwazi ukuthuthwa ngokulula.
282020 / Agasti
Zingaphi iintlobo zeempahla ezingaqhelekanga ezikhoyo?
Impahla yolonwabo inokwahlulwa ngokubanzi ibe yi-avant-garde leis, ukuzonwabisa kwezemidlalo, ukuzonwabisa ngothando, indawo yeshishini kunye nokuzonwabisa emaphandleni. 1.I-Avant garde ukunxiba nje okuqhelekileyo: I-Avant-garde ukunxiba nje okuqhelekileyo, okwaziwa ngokuba kukunxiba okuqhelekileyo, yeyona nto iphambili ...
Indlela ukukhetha ilaphu impahla yangaphandle?
Zininzi iintlobo zamalaphu kwimpahla yangaphandle. Yeyiphi eyona ilungele wena? Kukhetho lwamalaphu angaphandle, kukho imisebenzi emithandathu ebalulekileyo. Makhe sijonge ezi zinto zintandathu: Ukungena komoya inqanaba lomoya ...